FarfallaFVC-9215ST Vacuum Cleaner (1800 Watts) - အဝါ/ ငွေရောင် | အွန်လိုင်း SHOP.COM.MM တွင် ၀ယ်ယူမည်
Farfalla FVC-9215ST Vacuum Cleaner (1800 Watts) - အဝါ/ ငွေရောင်
2017 ဇှနျ 2
Farfalla FVC-9215ST Vacuum Cleaner (1800 Watts) - Yellow/ Silverအမွေးပွကောဇောပေါ်မှာတော့ သိပ်အဆင်မပြေဘူး ကျန်တဲ့နေရာတော့ ဖုံတော်တော်စုတ်တယ် အရမ်းကောင်းတယ် နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်
This Farfalla cleaner is an excellent little beast for its price! Does what it is supposed to do with almost zero hassles. နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်
ခြောက်သွေ့သောနေရာများသာမက စိုစွတ်သောနေရာများတွင်ပါ လိုသလိုသန့်ရှင်းပေးနိုင်ပါသည်။
ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက် FVC-9215ST Vacuum Cleaner (1800 Watts) - အဝါ/ ငွေရောင်